4 sababood awgood dadku waxay doorbidaan bushkuleetiga rakaabka lagu raaco | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn blog News 4 sababood awgood dadku waxay doorbidaan baaskiil wadayaasha korantada
Taariikhda ： 2020-07-29 Qeybaha ：News Muuqaalada ： 2,415 aragti
Iyo hada, baaskiilka korantada gaar ahaan waa mid aad u muhiim u ah u imaashada shaqada ama iskuulka iyo taam ahaanshaha. Tani waa mid ka mid ah habka safarka ee ku habboon inta lagu jiro COVID-19. Dad badan ayaa maal geliya baaskiil wadista korantada si ay u hubiyaan socdaalkooda maalinlaha ah. Halkan waxaa ah shan sababood oo dadku doorbidaan inay doortaan bushkuleetiga rakaabka sida midka weyn ama kan labaad.
Baaskiilada korantada ee korantada ayaa si dhaqso leh kuu geyn doonta, tani waxay noqon kartaa cunsur muhiim u ah safarkaaga maxaa yeelay ujeedadu weli waxay tahay in shaqada lagu qabto waqtigeeda. Sababtoo ah baaskiil koronto ayaa ka dhaqso badan baaskiil caadi ah. Markii mootada lagu rakibo baaskiil koronto magaalo, waxay ka caawin kartaa fuulista baaskiil xawaare u dhexeeya 25-ilaa-30 km saacaddii. Tusaale ahaan, haddii socdaalku yahay 8 km maalin kasta, celcelis ahaan xawaaraha baaskiil caadi ah oo qiyaastii ah 15 km saacaddii, waxay ku qaadanaysaa 27 daqiiqo in la raaco; laakiin baaskiil kaxeeya koronto ayaa adeegsada 25 kiilomitir saacadiiba adiga oo wata caawinaad marin ama awood dalab, kaliya 15 daqiiqo baaskiil koronto. Sababtoo ah baaskiilada korantada ayaa fududaan kara. Nidaamka kaalmeedka baydalka ayaa si isku mid ah awoodda ugu kordhinaya istaroog kasta, markaa waad ka kori kartaa wax ka badan intaad ku fuuli lahayd baaskiil caadi ah isla dadaal dad ah.
Lacag Ayaa Badbaadiyey
Raacista mootada korontada ku shaqeysa aad ayey uga qiimo jaban tahay wadista ama raacida gaadiidka dadweynaha. Tusaale ahaan, dhibta ugu weyn ee gaari wadista si aad ugu safartid magaalooyin badan ayaa ah inaad lacag badan bixin karto kaliya si aad gaarigaaga u dhigato. Laakiin dhigashada baaskiilku waa bilaash. Marka xigta, qiimaha shidaalka sidoo kale dhibaato. Iyadoo aan xisaab lahayn, cunista gaaska doolarku waa inuu ka dheereeyaa koronto dollar. Immisa ayuu ku kacayaa inta udhaxeysa gaariga iyo ebike? Waxaa laga yaabaa in qiimaha gaariga uu ka badan yahay toban jeer kan baaskiil koronto ku shaqeeya bishii.
U guurista bushkuleetiga korantada inaad shaqeyso ama iskuulka waxay kaa dhigeysaa inaad firfircoon tahay waxaadna lahaan kartaa faa'iidooyin caafimaad oo muhiim ah oo ay ka mid tahay joojinta cudurrada wadnaha, kansarka. Xaqiiqdii, baaskiilada korantada ayaa ka sahlan (yar oo aan xoog badneyn) in la raaco marka loo eego baaskiil dhaqameedyada, wali waxay kor u qaadaan nashaadaadka jirka, gaar ahaan marka la barbar dhigo wadista shaqada ama fuulista baska. Waxa taas ka sii dheer, ku-darista kaalmada maaliyadeed waxaay ka dhigeysaa rakaabka inay aad ugu badan tahay inay baaskiil ku shaqeeyaan inta aan gaari wadin. Marka baaskiil caawinta korantada waxay ku fiican tahay kuwa yiri ma heystaan ​​waqti ay ku habeeyaan jimicsiga ama kuma haboona inay ku filnaadaan inay jimicsi sameeyaan.
Haddii aad dib u baaskiil waddo xagaaga marka celceliska heerkulku yahay 33 darajo Celsius, waad dhididaysaa. Marka dhibicdan - baaskiilka rakaabka korontada ku shaqeeya wuxuu bixiyaa raacis dhidid la'aan ah hoosta habka korantada saafi ah. Gaar ahaan, baska raacaha marwalba wuxuu ubaahanyahay inuu diyaariyo dhar kale si uu ugu badalo si ay ugu ekaadaan nadiif, nadiif, iyo xirfadle shaqada, iyo baaskiil caadi ah way adagtahay in la daboolo baahidooda. Baaskiilada korantada waxay ka dhigeysaa isku-socodka laba-lugood leh oo suurtagal ah dad badan oo suurtagal ah, oo u oggolaanaya wadayaasha inay ku raaxeystaan ​​dhammaan faa'iidooyinka socdaalka baaskiil iyadoo la tirtirayo waxyaabo badan oo ka mid ah cilladaha ugu xun.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato baaskiilka raaca korantada, waad baari kartaa qormooyinkii hore ama booqo Websaydhada Rasmiga ah, sidoo kale fariintaada hoos ayaad uga tagi kartaa.
Tags:baaskiil korantada socda Baaskiilada korantada ee korantada
Ka hor: 3 Baaskiil Caan ah Oo Iib Ah - Baahi Baahidaada
Next: Waa maxay Baaskiillada ugu Wanaagsan Korantada Ka yar $ 1000
Isbarbardhig: Baaskiilka gawaarida korantada VS Mootada
Baaskiilka korantada VS mooto: kaas oo kufiican safarka